Lix koox Kubada Cagta Ciyaara Oo UK Ka Dhisan Oo Xarafka Ugu Horeeya Iyo Midka Ugu Danbeeya Ay Isku Mid Yihiin | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Maxaa Cusub » Lix koox Kubada Cagta Ciyaara Oo UK Ka Dhisan Oo Xarafka Ugu Horeeya Iyo Midka Ugu Danbeeya Ay Isku Mid Yihiin
Lix koox Kubada Cagta Ciyaara Oo UK Ka Dhisan Oo Xarafka Ugu Horeeya Iyo Midka Ugu Danbeeya Ay Isku Mid Yihiin	Waxaa Qoray: Abbas Ali Hassan Taariikh: 23-March-2017
Kooxahan waa kooxo caalami ah oo ka kal yimaada England iyo Wales, waxaana ku eegi doonaa kooxaha xarafka ugu horeeya iyo kan u danbeeya ay isku midyihiin.
Hadaba waa kan liiska oo dhameestiran kooxaha xarafka hore iyo kan danbe ay isku midka yihiin:
Aston Villa Football Club waa koox ka mid ah kooxaha England waxey kasoo jeedaa Witton -Birmingham waxaana la aasaasay 1874-tii, waxeyna ka tirsantahay kooxaha ugu faca weyn dalka England waxey heysataa todobo koob oo horyaal ah iyo todobo koob oo tartanka FA Cup-ka ah.
Dhamaadkii xili ciyaareydkii 2015-2016 Aston Villa waxaa u dhameestirantay xili ciuaareydkii 105-aad.
Celtic Football Club waa koox ka mid ah kooxaha Scottish ka yimaada waxaa ay ka dhisantahay agagaarka Parkhead Glasgow, waxaa dhibada loo taagay 1887-dii waxeyna kulankii ugu horeeyay ay ciyaartay sanadii 1888-dii, Celtic waxey ku guuleysatay Scottish League Championship 42-jeer xili ciyaareydkii ugu badnaa waa 2007-2008, Scottich Cup-na waxey hanatay 35-jeer halka Scottish League Cup ay ku guuleystaya 14-jeer.
waa koox ka mid ah kooxaha ka xamaasha dalka England qaasatan Charlton, Koonfur Bari ee London. waxey ka ciyaaraan League One heerka seddexaad ee dalka England.
Kooxda waxaa la aasaasay 9 June 1905, kooxdan waxaa la oogsoonyahay in ay hoos u dhac sameysay ka dibna ay sare u kac soo sameysay waxeyna haatan ku jirtaa waayo wanaagsan.
3. Northampton Town Northampton Town Football Club waa koox ka mid ah kooxaha kasoo jeda Northampton, Northamptonshire. kooxdan waxaa la aasaasay 1897-dii, waana koox aan saameyn weyn ku laheen saxada kubada cagta sanadii u danbeeyay.
Kilmarnock Football Club (KFC) waa koox ka timaada Kilmarnock, Ayrshire. waxaa la aasaasay 1869-kii, waana kooxda ugu faca weyn kooxaha Scottish Premier League.
kooxda gobolka Merseyside-ka kasoo jeeda waxaa dhibada loo taagay 1892, garoonka ay ku ciyaarto waa Anfield waxaana la dhisay 1884-tii.
Reds waa koox ka mid ah kooxaha ugu taageerayaasha Ugu wanaagsan heysata kooxaha qaarada yurub.